Hiran State - News: HS:- Wararkii ugu danbeeyey iyo Hiiraan
HS:- Wararkii ugu danbeeyey iyo Hiiraan
HS:-Magaalada Belet Weyne waa magaalo markaad dhinackasta ka eegto camiran siweyna ay isku dhax galeen bulshada Hiiraan iyagoona siweyn u hadal haya shirarka ka socda magaalada iyo masuuliyiinta soo gaartay gobolka iyo waliba kuwii horey ugu sugnaa.
Shirarkii ugu danbeeyey ee halkaasi ka dhaca ayaa u muuqda in laga gudbay caqabado dhawr ah oo ay ugu horeysay maxaa noo dan ah reer Hiiraan hadaanu nahay oo aan leys weydiin mudo 21 sano ah oo uu dalka ka socday dagaalo sokeeye, taasi oo ay reer Hiiraan ka dhaxleen jahwareer siyaasadeed oo la harey bulshada iyo horumarka guud ee gobolka.
Sikastaba waxaa magaalada Belet Weyne ku sugan masuuliyiin ka socotay dowlada kumeel gaarka iyo waxgarad reer Hiiraan ah oo qaarkood ay magaalada ugu danbeysay dhawr sano ka hor kadib markii ay uga carareen argagixisadii ka talin jirtay magaalada tan iyo dhamaadkii sanadkii tagay.
Shirarka hada bilaawga ah ayaa iskugu jiro dib u heshiisiin iyo sidii Hiiraan loogu heli lahaa maamul ay u dhan yahiin reer Hiiraan. dabcan reer Hiiraan markasta 99% waxey doonayaan iney degaankooda u helaan nidaam iyo kala danbeyn marka laga reebo 1% fowdo u joog ah oo iyagu la maqlay dagaaladii sokeeye kadib aaminsana in uu magacooda daaqada ka baxayo hadii ay reer Hiiraan shiraan oo ay la yimaadaan talo mideysan.
Sikastaba waxaa magaalada Belet Weyne caawa siweyn looga hadal hayaa maamulka ay reer Hiiraan yeelanayaan nooca uu noqonayo iyadoona meelaha ay shacabku iskugu yimadaan dadku aad ugu rajo weyn yahiin in ay Hiiraan ka dhalan doonto maamul goboleed shaqeeya waqti yar oo kumeel gaar ah ugu yaraana shaqeeya mudo 6 bilood ah si loogu gudbo maamul wadaag ay shacabku soo xushaan dadka u mateli doona doorashane loo maro si ay jaanis ay ku hogaamiyaan bulshada u helaan aqoonyahanada reer Hiiraan ee ku kala sugan dal iyo dibad.
Waa guul u soo hoyatay reer Hiiraan marba hadey dhisanayaan maamul ku yimid rabitaanka waxgaradka iyo talada bulshada Hiiraan kuwooda ku sugan gudaha, iyadoona ay hada u muuqdaan shirarka ilaa hada la qabtay kuwo guul ku dhamaaday maadama ay u dhan yahiin siyaasiyiinta iyo waxgaradka reer Hiiraan iyadoo qabiil kasta lagu ixtiraamayo fikirkiisa iyo taladiisa si fowdada looga baxo.
Dhinaca kale warar aan la hubin ayaa sheegayo in ay dhawaantan gaari doonaan gudaha magaalada Belet Weyne wafti iskugu jira Ugaasyo, siyaasiyiin, waxgarad, aqoonyahano ka bixi doona dalka Kenya kuwaasi oo ay ujeedadoodu tahay sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen dadaalada iyo shirarka ka socda magaalada Belet Weyne.
Isku soo duuboo inta samaha iyo horumarka reer Hiiraan jecel aad ayey ugu faraxsan yahiin shirarka ka socda magaalada ee dhax maraya qeybaha kala duwan ee bulshada Hiiraan oo ay ugu horeeyaan waxgaradka iyo siyaasiyiinta reer Hiiraan iyadoona ay goobta ku sugan yahiin wasiirka Qorsheynta iyo xiriirka caalamiga iyo wasiirka Macdanta iyo Biyaha oo halkaasi siweyn loogu soo dhaweeyey.
Nabadgalyada magaalada Belet Weyne ayaa ah mid aad u wanaagsan waxaana ku sii qul qulaya shacab badan oo reer Hiiraan ah oo ka kala imaanaya dalka intiisa kale si ay goob joog ugu noqdaan maamulka lagu wado inuu Hiiraan yeesho dhawantaan.waxaana lagu wadaa in dib loo bilaabo ciyaarahii kubada cagta ka hor inta aan maamulka lagu dhawaaqin.
Shacabka Hiiraan dal iyo dibad waxaa muhiim u ah Hiiraan oo nabad ah iyagoona rajeynaya in dhawaantan Hiiraan loo heli doono shaqsi reer Hiiraan isku soo dumiyo oo aragti fog ogna waxa ay reer Hiiraan isku yahiin kadibna Soomaaliweyn gogol nabadeed ugu fidin kara Hiiraan mustaqbalka dhaw.
Sida ay wax ku socdaan waxaa adkaan doonta in uu Hiiraan wax ka noqdo shaqsi leh aniga, waxaana sahlanaan doonto shaqsi leh anaga hadaaanu nahay reer Hiiraan iyo wax la mid ah inuu wax ka noqdo Hiiraan, waayo ninkii reer Hiiraanimo wax ku raadiya ayaa Soomaaliweyn haweysan karo.
Sidii caadada aheyd waxaanu sugnaaba waa madaxa Dooxada Shabelle oo 24kii saac ee kasta kala hadla marna yiraahda waanu u tanaasuleynaa bulshada Hiiraan, marna yiraahda hadal kaas ka duwan reer Hiiraanka gudaha wey yaqaanaan laakinse qurba joogta markey arkaan isagoo idaacadaha midba war gooyni ah u sheegaya oo hadalkii uu saakay yiri mid ka duwan caawa u sheegaya bulshada iyagaa qiyaasi doona waxa suura galin waayey in Dooxada Shabelle lagu aamino talada bulshada Hiiraan iyagoo soo halgamay kuna sugan magaalada Belet Weyne ileen reer Hiiraan waa dad nabad jecel cidii ay wanaag ku ogyahiina madaxa ayey sartaane?.
Waxaan horey u aragnay isagoo leh Dooxada Shabelle ma aqoonsana wax TFG la yiraahdo isla maalintii danbe waxuu Hiiraan wax ka soo dhaweyey waftigii r/wasaaraha kadibna subaxii danbe waxuu hadane yiri ma aqoonsani wax dowlad la yiraahdo isagoona banaan bax abaabulay uu ku muujinayo arintaas. waxaa xigay maalintii shaleyto aheyd markii ay waftiga soo gaaren magalada Belet weyne isagoo hadana leh Dooxada Shabelle waxey u tanaasuleysaa shacabka Hiiraan hadii ay noo gartaan in aanu sii hogaaminana diyaar ayaan u nahay. waxaa xigay maanta hadane isagoo leh dowlada waanu aqoonsanahay wax aanu ka tanasuleyno ma jirto Dooxadane waa maamuul jira.
Masuulkaan waxaa iskaka qaldan sida loo maareeyo siyaasadaha maalinlaha ah iyo mustaqbalka Hiiraan sida ay qabaan aqoonyahano badan oo si joogta ah ula socda arimaha Hiiraan.
La soco wararkeena danbe iyo isbedelka siyaasaded ee ka soo ifayo Hiiraan
· admin on January 23 2012 21:29:14 · 0 Comments · 2047 Reads ·
14,613,518 unique visits